Gaajada Oregon - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-free
Dhibaato aynaan iska indho tiri karin
Iyadoo ay gaajo hoos u dhacday Oregon, haddana si joogto ah ayay u sarraysaa. Taasi waa sida uu qabo a Warbixinta cusub ee USDA ee ku saabsan haqab-beelka cuntada ee Maraykanka Ku dhawaad ​​​​mid ka mid ah todobadii qoys ee Oregon waxay ahaayeen "cuntadu mid aan sugnayn" intii u dhaxaysay 2014-16.
Gaajo waa qaali dhammaanteen. Warbixinta Gaajada ee 2016 ee laga soo xigtay Roodhida Adduunka ayaa lagu qiyaasay in gaajada iyo cunto yarida ay ku biiriyaan $160 bilyan biilka caafimaadka Maraykanka. Waxaan wax ku bixinaa hoos u dhaca waxbarashada iyo dhaqaalaha, cudurro badan oo la xiriira gaajada, iyo ku tiirsanaanta weyn ee adeegyada aadanaha iyo barnaamijyada cuntada degdegga ah.
Gaajada waa walaac caafimaadka bulshada oo leh cawaaqib mustaqbalka fog. Waxaa jira cadeymo muujinaya in haqab-beelka cuntadu ay ka qayb qaadato buurnaanta iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dambeeya, gaar ahaan haweenka. Cunto-la'aanta carruurtu waxay keeni kartaa guul-darrada dugsiga oo liidata iyo caafimaadka waxyeello u geysata inta uu nool yahay oo dhan, waxaana inta badan ka mid ah arrimaha dhaqanka iyo dhibaatooyinka bulshada. Dadka da'da ah ee aan nafaqo-darrada haysan ayaa 53 boqolkiiba aad ugu dhow inay soo sheegaan wadno-qabad, 52 boqolkiiba waxay u badan tahay inay ku dhacaan neefta iyo 41 boqolkiiba waxay u badan tahay inay soo sheegaan waayo-aragnimada wadne-xanuunnada.
Xaaladda hadda ee gaajada ee Oregon
Gaajo waa arrin sinnaan
Gaajada ayaa wax u dhimaysa dhammaanteen bulsho ahaan, laakiin waxay si aad ah u saamaysaa qaar naga mid ah oo ku nool Oregon si ka badan kuwa kale.
Wada-hawlgalayaasha Gaajo-Free Oregon waxay muddo dheer u heellan yihiin inay wax ka qabtaan sinnaan la'aanta dhaqaale si aan u gaarno hadafkeenna, waxaanan tilmaannaa faqriga oo ah hal sabab oo cad oo gaajada ah. Mid ka mid ah toddobadii qoys ee Oregon ku nool ayaa sheegay in aanu si joogto ah u haysan lacag uu ku iibsado cunto nafaqo leh.
Waxaan ognahay inay jiraan sababo kale oo xidid ah-xitaa qoto dheer oo aad u adag oo loo toleeyey qaab dhismeedka asaasiga ah ee bulshadeena-sida cunsuriyadda habaysan iyo jinsiga.
Dadka faqriga haysta waxaa ka mid ah dadka qaar ayaa halis aad u weyn ugu jira gaajo. Cunto-la'aanta waxay si aan xad lahayn u saamaysaa bulshooyinka midabka leh, soogalootiga dhawaanta soo guuray, qoysaska carruurta leh iyo gaar ahaan qoysaska ay hogaamiso hooyooyinka keligood ah, dadka naafada ah, bulshada LGBTQ iyo dadka ku nool dhulka miyiga ah ee Oregon.
Si fudud ma gaadhi doono himiladayada Oregon gaajo ka xor ah, halkaas oo qof kastaa uu caafimaad qabo, kuna kobcayo, iyada oo aan si gaar ah diiradda loo saarin ka hortagga gaajada kooxahan dadka ah.
Joojinta gaajada waxay u baahan tahay wax ka qabashada sababaha asaasiga ah
Raadintayada sinaanta iyo cadaalada, waxaan dib u xaqiijineynaa ku dhawaaqista aasaaska kooxda Hunger Task Force ee Oregon in "Dhammaan dadku waxay xaq u leeyihiin inay ka xoroobaan gaajada" waxaanan dib u ballan qaadnaa inaan u shaqeyno magaca kuwa si aan macquul ahayn loo diiday xaqaas.
Horumarinta our Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee 2016-18, waxaan ka maqalnay daraasiin la-hawlgalayaal ah, mutadawiciin ah iyo dad (xidhiidhinta helitaanka bogga haqab-beelka cuntada) waxaan u adeegnaa sida ugu wanaagsan ee loo kordhin karo sugnaanta cuntada labada sano ee soo socota. Natiijadu waa ujeeddooyin cad oo diiradda saaraya saddex yool: raadinta sinnaanta, dhisidda dhaqdhaqaaqa gaajada iyo xoojinta awoodda ururkayaga.
Qof walba door buu leeyahay!